Haddii aad rabtid in aad wax caawisid - Krisinformation.se
TB8 Hjälpa till So
Dad badan oo uu feyruska corona siyaabo kala duduwan u haleelay waxay hadda u baahnaan karaan caawimaad iyo taageero. Waxay ku saabsanaan kartaa in laga caawiyo xagga laamaha caafimaadka ama cunto loo soo iibiyo qofka aan dibadda u bixi karin. Halkan waxaa ku jira macluumaad ku aaddan sida aad wax u caawin kartid.
Dad badan waa ay karantiilanyihiin feyruska corona awgiis. Halkan waxaad ku soo sheegi kartaa in aad daneyneysid in aad mutadawic u noqotid Laanqeyrta Cas. Boggu waa af-Iswiidhish. Caawimaad weydiiso qaraabada ama saaxiibbada haddii aad rabtid in aad is qortid. Dadka ku hadla luqad kale oo aan Iswiidhish ahayn wax weyn ayey tari karaan. In la noqdo mutadawic waxay tusaale ahaan ka dhigantahay in wadahadal xagga taleefanka ah wax lagu taageero ama in cunto loo soo iibiyo qof aan bixi karin.
Qof kale u soo qaad dawo ay tahay in uu dhakhtar qoryo
Wixi ku saabsan wakiilashada qof kale u soo qaadidda dawooyinka waxay ku jiraan barta intarneetka ee E-hälsomyndigheten.
Qalab loogu tala galay laamaha caafimaadka
Hey’adda Caafimaadku waxay sameysay foom loogu tala galay shirkadaha raba in ay laamaha caafimaadka ka iibiyaan walxo iyo qalab. Halkan waxaa ku jira macluumaad dheeraad ah iyo foomka. Boggu waa af-Iswiidhish. Ha ku caawiyo qof qaraabo ah ama saaxiib haddii aad rabtid in aad sheegtid in aad walxo iyo qalab iibineysid.
Goballo iyo degmooyin
Goballo badan oo waddanka ka mid ah waxay u baahanyihiin shaqaale caafimaad oo waxbarasho leh. Xitaa dhakhaatiir, macallimiin dugsi xannaano, mas’uuliyiin xagga IT-ga ah, mas’uuliyiin xagga HR-ka ah iyo shaqaale kale waa loo baahanyahay. Degmooyinka iyo goballada Iswiidhan waxay ururiyeen macluumaadka xiriirka ee degmooyinka iyo goballada waqti gaaban gudihiis raadinaya shaqaale dheeraad ah. Waxay noqon kartaa wax fiican in la ogaado in degmooyin fara badan uu culeys adagi saaranyahay iyo in ay waqti qaadan karto inta aad jawaab heleysid. Qaraabo ama saaxibbo ha kaa caawiyaano in aad la xiriirtid haddii aad waxbarasho leedihid laakin aadan ku hadlin af-Iswiidhish ama a-Ingiriis.